DHEGEYSO: BREXIT, Arrin saamayn xun ku yeelan karta Soomaali badan oo ganacsato ah oo laga digey! | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka DHEGEYSO: BREXIT, Arrin saamayn xun ku yeelan karta Soomaali badan oo ganacsato...
DHEGEYSO: BREXIT, Arrin saamayn xun ku yeelan karta Soomaali badan oo ganacsato ah oo laga digey!
(Stockholm) 28 Agoosto 2019 – In ka badan 5,000 oo sharikadood oo iskugu jira kuwo yar yar iyo kuwo heer dhexaad ah ayaan weli dalbanin waxa loo yaqaanno lambarka Eori oo ah rukhsad looga baahan yahay hay’adda Kastamada Sweden si wax is dhaafsi ganacsi loola sameeyo Britain kaddib Brexit oo lagu wado inuu dhoco bisha Oktoobar. Waana arrin sidoo kale saamayn doonta Soomaali badan oo ganacsato ah oo kala haysta dhalashada labada dhinac.
Haddii ay Britain Midowga Yurub heshiis la’aan ka baxdo bisha Oktoobar dhamaadkeeda oo ay haatan 2 bil uun inaga xigaan, deeto kumanaan sharikadood oo Swedish ah ayaa dhibaato kala kulmi kara inay badeecooyin kasoo waaridaan dalka UK, haddii aanay rukhsad ka helin hay’adda kastamka, waana arrin ay aad uga walaacsan tahay Wasiiradda Maaliyadda Sweden, Magdalena Andersson.
”Waxa uu walaaca ugu badani iga haystaa waa sharikaadka yar yar ee laga yaabo inay la qabsadeen inay la macaamilaan dalalka ku jira Midowga Yurub, balse aan u baran dal 3-aad oo ah mid aan ku jirin Midowga Yurub, markaasoo loo baahan yahay geeddi socodyo dhaadheer iyo rukhsooyin loo baahan yahay in la dalbado,’’ ayay tiri Magdalena.
UK waa dalka ugu ballaaran ee ay Sweden wax u dhoofiso kalana soo degto – sanadkii tegey oo qura waxay is dhaafsadeen ganacsi iyo adeegyo ku kacaya 150 bilyan oo karoon. Waxaana Britain saldhigta qiyaastii 1,000 sharikadood oo Swedish ah.
Todobaad kasta, 6 doonyood ayaa kusoo xirta khoorka dekedda Gothenburg kuwaasoo ka yimaada dekedda Immingham ee degmada Lincolnshire ee dalka UK, iyagoo sida badeecooyin ama gawaarida xamuulka qaada oo cunto iyo bagaash kasoo qaada UK.
Balse maadaama ay UK ka baxayso Midowga Yurub waa inay badeecadaasi waafaqdaa xeerarka EU, iyadoo qofkii aan haysanin lambarka Eori aanu badeeco ka keeni Karin UK, taasoo ah arrin deg deg ah oo xitaa 20% kordhisay shaqada hay’adda Kastamada, isla markaana ay u qorteen shaqaale oo cusub oo gaaraya 35 qof, sida ay sheegtay Åsa Wilcox, oo ah Agaasime Waaxeed ka tirsan Hay’adda Kastamada Sweden.
”Qaar badan baa muddo dheer arrintan daystey, dhib baad kala kulmi doontaa inaad hesho badeecooyinkaaga, ama xitaa inaad tu kale dhoofiso, waayo tillaabadani waa shuruud ku hor gudban inaad ganacsi samayso,” ayay tiri Ms Wilcox.
Haddii ay Britain ka baxdo Midowga Yurub 31-ka Oktoobar, saqda dhexe ee 1-da Nofeembar wixii loo gaaro qofkii aan horay u bixin waajibaadyada Kastamka iyo canshuurta la saaro badeecooyinka iyo adeegyada ee VAT, waxaa dhici karta in aanay badeecadiisu soo degin.
Waana arrin ay maanta dowladda Sweden uga warbixin doonaan Wasiiradda Maaliyadda Magdalena Andersson iyo Wasiirka Midowga Yurub, Hans Dahlgren oo ka hadli doona sida ay Sweden ugu diyaar garowdey bixitaanka Britain.
Previous articleIsticmaalka Facebook oo ay dhici karto in LACAG laga dhigo!!
Next articleDHEGEYSO: Siyaasi Soomaali ah oo dowladda Sweden kala hadlay arrin dhib ku haysa dhallinyaro Soomaaliyi ku jirto + Warar kale